कुनै पनि उपकरणमा Hulu कसरी सक्रिय गर्ने? - मनोरञ्जन
कुनै पनि उपकरणमा Hulu कसरी सक्रिय गर्ने?
Hulu एक शीर्ष मूल्या rated्कन स्ट्रिमि app अनुप्रयोग हो। यसले लगातार धेरै लोकप्रिय टिभी च्यानलहरू र अन्य अनुप्रयोगहरूसँग साझेदारी गरी तपाईंलाई अधिक 'किफायती' स्ट्रिमि। प्याकेज ल्याउनको लागि हो। Hulu को addons लाई प्रत्यक्ष टिभी, HBO, डिज्नी +, ESPN +, स्टारज, र अधिक समावेश छ। तपाईं या त अनुप्रयोग मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ वा अन्य अनुप्रयोगहरूमा व्यक्तिगत रूपमा लग इन गर्नुहोस्।
जे होस्, यी सबै प्याकेजहरू सक्रिय गर्न यो अलिकति भ्रामक वा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यदि तपाई कम्प्युटर मार्फत उपकरणमा हुलु सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने नि? यहाँ तपाईं संग मद्दत गर्न एक पूर्ण विकसित गाइड छ।
तपाईंले Hulu सक्रिय गर्न आवश्यक सबै चीज:
तपाईंलाई उपयुक्त उपकरणको साथ Hulu सदस्यता आवश्यक पर्दछ यसलाई दिइएको उपकरणमा यसलाई सक्रिय गर्न। यदि तपाईंलाई सक्रियता कोड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई पीसी चाहिन सक्छ। जहाँसम्म, तपाईं यो मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ वेब ब्राउजर तपाईंको मोबाइल फोनको पनि।
अधिक सक्रियता मार्गनिर्देशनहरू चाहनुहुन्छ? तल जाँच गर्नुहोस्:
डिस्ने प्लस नि: शुल्क परीक्षण सक्रिय गर्नुहोस्
Hulu बिभिन्न उपकरणहरूमा सक्रिय पार्ने कदमहरू:
एक समय आउँदछ जब तपाईंसँग अन्य उपकरणहरू छन् जुन तपाई हुलूका लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। यद्यपि, अनुप्रयोग डाउनलोड गरेपछि, यसले तपाईंलाई फेरि लग इन गर्न सोध्न सक्छ। नतिजाको रूपमा तपाईले फेरि प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड लेख्नुपर्नेछ। यो प्रक्रिया अन्य उपकरणहरूको लागि पनि जारी रहन्छ।
यद्यपि तपाईले यस खातालाई लगइन गर्न लिनु भएको समय कम गर्न सक्नुहुन्छ हुलु द्वारा प्रदान गरिएको 'सक्रिय' सुविधा प्रयोग गरेर। Hulu बाट एक सक्रिय सुविधा तपाईंलाई एक सक्रियता कोड प्रदान गर्दछ। यो ओटिपी (वन टाइम पासवर्ड) सँग मिल्दोजुल्दो छ कि तपाईंले उपकरणमा टाइप गर्नुपर्नेछ तपाईंले हुलूलाई सक्रिय गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
किन यो सजिलो सुविधा हो? उपकरणहरूका लागि गेमि Con कन्सोल जस्तो कीवर्ड छैन, पूर्ण प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड टाइप गर्न यो व्यस्त हुन सक्छ। यदि तपाईं गलत प्रयोगकर्ता नाम वा पासवर्ड टाइप गर्नुभयो भने तपाईंको रिस उठ्न सक्छ। यसैले तपाईले धेरै समय खेर फाल्नु भयो।
जे होस्, यी चरणहरू अनुसरण गरेर, तपाई हालूलाई हावाको साथ सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ:
Hulu अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् जुन तपाई यसलाई सक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ
भ्रमण गर्नुहोस् https://secure.hulu.com/activate
दोस्रो चरणको लागि तपाईले पहिले लगईन गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
लग ईन गरे पछि, वेबसाइटले तपाईंलाई सक्रियता कोड देखाउन सुरू गर्दछ
उपकरणमा स्विच गर्नुहोस् जुन तपाई Hulu चाहानुहुन्छ र अनुप्रयोग खोल्नुहोस्
साइन इन गर्नुको सट्टा, 'कम्प्युटरमा यस उपकरण सक्रिय गर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यहाँ सक्रियता कोड इनपुट गर्न एक सेक्सन हुनेछ। वेबसाइटमा तपाईलाई दिइएको कोडमा टाइप गर्नुहोस्
तपाईंको उपकरण सक्रिय हुनेछ।
कसरी डिज्नी + वा ESPN + Hulu मा सक्रिय गर्ने?
Hulu सँगसँगै छ डिज्नी + र ESPN + तपाइँलाई कम्बो सदस्यता प्याकेज ल्याउन। यसले तपाइँलाई डिज्नी + र ESPN + लाई Hulu का साथ आनन्द लिन मद्दत पुर्‍याउँछ। यो पनि अधिक किफायती प्याकेज हो यदि तपाइँ तीन अलग अलग खरीद गर्नुहुन्छ। जे होस्, भत्ताहरू सक्रिय गर्नु पूर्ण रूपमा फरक प्रक्रिया हो।
तपाईं सक्रियताका साथ अनुसरण गर्न सदस्यता पछि एक ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसले तपाइँलाई डिस्ने + र ESPN + सक्रिय गर्नका लागि लिंक प्रदान गर्दछ। यद्यपि यो समय लिने वा डरलाग्दो कार्य हुन सक्छ। यस प्रकार, तपाईले यी अनुप्रयोगहरू हुलू मार्फत पनि सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ।
याद गर्नुहोस्, तपाईंसँग हुलु, डिज्नी, र ESPN कम्बो प्याकेज सदस्यता यसलाई सक्रिय गर्न आवश्यक छ। अब, यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
Hulu अनुप्रयोग खोल्नुहोस् वा भ्रमण गर्नुहोस् Hulu.com वेबसाइटमा
सदस्यता भएको खातामा लग इन गर्नुहोस्
अब 'गतिविधिहरू' सेक्सनमा जानुहोस्। त्यहाँ सम्भवतः अन्य विकल्पहरू पनि उपलब्ध छन्
तल Disney + र ESPN + मा स्क्रोल गर्नुहोस्
त्यहाँ तिनीहरू पछाडि 'सक्रिय' बटन हुनुपर्दछ।
एक पछि अर्को तिनीहरूलाई थिच्नुहोस्, किनकि Hulu तपाईंको लागि यी अनुप्रयोगहरू सक्रिय गर्दछ
तपाईले सक्नुभयो। सदस्यताहरू सक्रिय हुनेछन्।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईसँग डिज्नी + र ESPN + स्थापित छ उपकरणमा सजिलो बनाउन को लागी Hulu अनुप्रयोग को सक्रिय गर्न को लागी। यदि तपाइँ यसलाई वेब ब्राउजरबाट सुरू गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले प्रत्येक अनुप्रयोगमा लग इन गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि तपाईले आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड तपाईको हुलूको रूपमा प्रदान गर्नु पर्छ।
Hulu Disney + App बाट कसरी सक्रिय गर्ने?
Hulu को कम्बो बाहेक, त्यहाँ डिज्नी + कम्बो पनि छ जसले Hulu प्रदान गर्दछ। जब तपाईं कम्बो मार्फत डिज्नी + को सदस्यता लिनुहुन्छ, तपाईं Hulu स्वचालित रूपमा पाउनुहुनेछ। यसका लागि तपाईले Hulu सक्रिय गर्न ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्नुभएन भने, तपाईंले यसलाई म्यानुअल्ली सुरू गर्नुपर्दछ। जे होस्, यदि तपाईं अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, तपाईं डिस्नेको अनुप्रयोग मार्फत आफ्नो Hulu सक्रिय गर्न सक्नुहुनेछ।
यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
Disney + App खोल्नुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सही खातामा लग इन हुनुहुन्छ
अब तपाईले विकल्पहरू र बिलि details विवरणहरूमा जानुपर्नेछ। यहीँ जहाँ तपाइँ सम्बन्धित जानकारी पाउनुहुनेछ
तल स्क्रोल गर्नुहोस्, र यदि तपाईंको सदस्यता प्याकेजमा Hulu छ भने, तपाईं Hulu सूचीबद्ध देख्नुहुनेछ
अब, हुलुको छेउमा रहेको 'अहिले हेर्नुहोस्' मा क्लिक गर्नुहोस्
तपाईंको Hulu सदस्यता सक्रिय हुनेछ
Hulu फोनमा स्थापित भएको छ भनि निश्चित गर्नुहोस्। यो तपाईंको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया सजिलो बनाउँदछ।
Hulu सक्रियको साथ उपकरणहरूको ट्र्याक कसरी राख्ने?
Hulu सधैं एक ईमेल सूचना प्रदान गर्दछ जब नयाँ उपकरण तपाईंको खाताको साथ सक्रिय हुन्छ। जे होस्, यदि तपाईंले मेल हराउनु भएको छ भने, त्यहाँ यो गर्न सजिलो तरीका छ। यस चरणले तपाइँ सबै उपकरणहरू कि तपाइँको Hulu खाता मा सक्रिय छन् जाँच गर्न सक्षम गर्दछ।
यसैले, तपाईं यी उपकरणहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईं त्यसो गर्न आवश्यक भए पनि तिनीहरूबाट लग आउट गर्नुहोस्।
पहिले, भ्रमण गर्नुहोस् Safe.hulu.com/account
यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं लग इन हुनुहुन्छ र Hulu मा तपाईंको उपकरणहरूमा क्लिक गर्नुहोस्
त्यस पछि, तपाईंसँग विकल्प छ 'उपकरणहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्।' यसमा क्लिक गर्नुहोस्
अर्को स्क्रिनमा देखा पर्नेछ कि तपाइँ तपाइँको Hulu खाता को साथ सक्रिय सबै उपकरणहरु देखाउनेछ। तपाईं सक्रियताको मिति पनि देख्नुहुनेछ
यदि तपाईं कुनै उपकरण हटाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं उपकरणको छेउमा 'हटाउनुहोस्' मा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ, र हुलु त्यस उपकरणको लागि निष्क्रिय हुनेछ।
त्यहाँ तपाईं जानुहोस्! अब तपाईं सक्नुहुन्छ Hulu कहीं पनि आनन्द लिनुहोस् तिमी मनपराउँछाै। यी सक्रियता प्रक्रियाहरू अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि पनि पछ्याउन सकिन्छ। धेरै जसोसँग समान विकल्पहरू छन्। त्यसो भए अलि अन्वेषणले तपाईंलाई यसको साथ मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने तिनीहरूलाई टिप्पणी सेक्सनमा पोष्ट गर्नुहोस्। र हामी तपाईंलाई ASAP फिर्ता प्राप्त गर्नेछौं!
कसरी शोटाइम कुनै पनि समय सक्रिय गर्ने?
Tubi TV गाइड सक्रिय गर्नुहोस्
के मंगास्ट्रीम तल छ? सर्वश्रेष्ठ विकल्प (२०२०)
Best० उत्तम चलचित्रहरू नेटफ्लिक्समा हेर्नका लागि
जेक Gyllenhaal चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू - तपाईंले हेर्नु पर्छ!
कसरी डिज्नी प्लस खाता रद्द गर्ने?
सिनेमा अवलोकनका लागि उत्तम ट्याबलेटहरू - अधिक प्रयोग गरिएको (२०२०)
श्रव्य विद्यार्थी छुट कसरी पाउने?
यूट्यूब टिभी प्रोमो कोड - डिसेम्बर २०२०
२०२० मा सर्वश्रेष्ठ क्रस-प्लेटफर्म खेलहरू
पीसी स्क्रीनलाई क्रोमकास्टमा कास्ट गर्दै
रोबलोक्स मोबाइलमा कसरी खेल बनाउने
सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क फिल्म वेबसाइटहरू साइन अप हुँदैन
रोबलोक्स २०१ on मा नि: शुल्क केहि कसरी पाउने
nvidia gefor rtx 2080 vs gtx 1080